သက်ဦး: (၅၀) ဒေါသကုမ္မာရကြီး ဗိုလ်နေ၀င်း (ကြေးမုံဦးသောင်း)
Posted by Thet Oo at 12:18 PM
အရမ်းကို ဗဟုသုတရစေပါတယ်၊၊ မြန်မာပြည်ကို ဖျက်စီးသွားတဲ့ နေ၀င်ချိန်မကောင်းတဲ့ အာဏာရှင် ကြီး တစ်ယောက် အကြောင်းဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားစွာ ဖတ်သွားပါတယ်၊၊ ပိုပြီးပြည့်စုံသွားအောင် အောက်ပါ လင့်ခ် လေးကိုဝေမျှပါတယ်၊၊
Ne Win's legacy is full of jealousy,anger,hatred, selfishness,however compare to the current regime head Than Shwe, I would say he was much better asahuman-being. Sayar Thaw Dar Swe is the another writer, Ne Win showed respect.
The article mentioned in Readers digest was title as " Burmese way to ruin" when " Burmese way to socialism" motto was popular at that moment.
The worse mistake in his legacy was he passed his dictatorial power to the monster generals thousand times brutal than him. For that he will pay the price in hereafter.